710 online! | Sidvisningar idag: 55 940 | Igår: 185 872 |
"Lacagla'aan, inaannu galno talisnimada digital"
"Lacagla'aan, inaannu galno talisnimada digital", ayaa sheegay Björn Eriksson, Guddoomiyaha hore ee bilayska qaranka. Sida laga soo xigtay baadhitaan cusub, March 24, 2023 sida lacag caddaan ah uu noqdo ku tacaluqda ee Sweden.
Australia Yeruusaalem aqoonsan sida reer binu Israa'iil ee caasimada
By Holger Nilsson Australia hadda Yeruusaalem la aqoonsado sida reer binu Israa'iil ee caasimada.
44 ku dhintay toogasho tan iyo sanadkan ee Sweden
Ilaa hadda sanadkan waxa jiray 44 toogasho loo gaystay ee Sweden. record ka soo sannadkii la soo dhaafay 43 meyd u yahay dagaalka ku jira.
Church Handbook xumeeyaan saaxiibtinimo kitaabiga ah in xiriirka gay
Buug-kaniisadda cusub xumeeyaan sheekooyinka kitaabiga ah in ay ka mid khaniisnimada ee qaybta ku saabsan guurka. Waxay ku andacoodeen in saaxiibtinimada dhexaysay Daa'uud iyo Yoonaataan iyo Ruth iyo Nimco oo ku saabsan xiriirka gay.
waxaan u garan karaa calaamadaha?
By Mikael Walfridsson By baranayay calaamooyinka wakhtiyada, waxaan noqon kartaa qaarkood oo ku saabsan, in aanu ku nool nahay dhammaystirka mustaqbalka. Haddaba waa maxay dabeecadda in uu yahay muhiim noo ah in la ogaado iyo dareemayaa jeer aannu ku dhex nool?
Ha ku dhicin in aad tahay?
AI - sirdoonka macmal - fulinta ee Kitaabka Quduuska ah 2000 sano ka hor
Waxaa hadda ka dhacaya xawaare breakneck waa AI, sirdoonka macmal (sirdoonka macmal), oo uu horey u horumariyo hadalka iyo fikirka aalado. Sidaas waxa qoray wargayska ma this in lagu cabsiiyo, laakiin si aannu u ogaadaan sida fog tahay 2,000 oo sano ka hor Kitaabka Quduuska ah saadaaliyay horumarka farsamada ayaa, sidaas darteed waxaan xaq u leeyahay inuu tilmaamaya waqtiga leeyihiin!
UN heshiis khaayinnada waxaa shalay ansixiyay
Photo: waqtiga Free.
Shalay la ansixiyay Immigration Heshiiska ee Qaramada Midoobay kaas oo, in mabda, soohdintooda ah oo ay ka furo, socdaalka free. Laakiin sida martiqaadka Nobel adkaaday shalay la waayay heshiiska UN taariikh daran ee qaylada warbaahinta.
aragti midho kama dambaysta ah ee geedka aqoonta
Tani waxay u muuqan kartaa afkaar, laakiin tani waa waqtiga ugu adag Contemporary qof aan ka akhrisan in aragtidan iyo Kitaabka Quduuska ah, oo waa in aynu xaq u leedahay in Time Afcelinta!
Iskutallaabta ku qodob, iskutallaabta ku qodob!
Reader Mail by David B Waxaa sugan, mobs qaylo: Iskutallaabta ku qodob, iskutallaabta ku qodob, kuwa Ciise raaca iyo waxa Ciise u taagan tahay. ka dibna waxay waayi doonaa sababta in aanay ogayn waxay isu yihiin toogtay cagta.
Islam Fidiyay iyadoo la kaashanayo of Church ee Iswiidhan
Christer Åberg maraa qaar ka mid ah wararka la mariyo. Shaki kuma jiro in aanu ku nool yihiin maalmaha ugu dambeeya marka aad qaadatid qaar ka mid ah war kuwan.
Iyada oo hadal kor ku xusan, mid ka wici karto kuwa qabaa in wakhtigii wuu dhow yahay oo dhan iyo in aad qaadato cawaaqibka waxaa ka mid ah.
Saddexda Samooyinka in Kitaabka Quduuska ah
Aayaddan ugu horeysay ee Kitaabka Quduuska ah uu ku leeyahay in qoraaladii asalka ahaa in Eebe u abuuray Samooyinka iyo Dhulka. Ilaah samooyinka ka badan abuuray.
Sweden lacag oo lacag la'aan ah saddex ilaa shan sano gudahood - wax sii sheegidda Bible rumoobay
"Sweden noqon doonaa 'listicmaalka' saddex ilaa shan sano gudahood", ayuu yiri Guddoomiyaha ku xigeenka Cecilia Skingsley shir bangiyada ee London a.
Ciise ayaa u yimid oo mar kale ku soo noqon doonaa
Waxaan sugayso Ciise socda labaad, ma ugu horreeyey. Oo imaanshaha ma noqon doonto muddo dheer. Laakiin Ciise markuu yimaado xadhkaha in ay dib, wuxuu yeelan doonaa wax inuusan ahayn markii ugu horeysay ee uu u yimid. Ma og tahay waxa ay noqon kartaa wax?
Marka la badbaadiyey, had iyo jeer ku badbaado?
Kalvanistpstorn Pastor John Loopez la siiyey Rabbiga si aad u aragto sida beenta ah cilmiga tani waa.
Dhulgariirka ee Alaska - Ciise waxsii rumowday
Alaska ayaa ku dhacay laba dhul gariir aad u xoog badan. Goes iyo sidoo markuu u dhawaaqay xaalad degdeg ah musiibada. Ciise hadli of dhulgariir weyn in uu dhaco. Ha noo barya, waayo marka ka dhacay.
Sheegidda oo ka mid ah qaadida iyo Dhibaatada Weyn
The wax sii Bible in waqti rayrayn ka dhici doona iyo badbaadiyey tegi jireen qolalka soo galay halka fitnada waa in horumarka on Earth.
Waxay ku hawlan la dheertahey a
Amanda Liberty ayaa ku hawlan in ay dheertahey a in ay "jecel inuu dhunkado iyo salaaxdo leh."
No si aynu gudcurka ku
In adeegyo aan Ilaah u ka dibna, waxa uu ahaa oo ku saabsan xaaladaha ka sii daran halka ay labada jidhkayga oo aan naftayda uu halis. hanjabaad dil ah ka neo-Nazi maxaa yeelay, waan istaagay oo qaxooti ah, oo aad u dhow in ay dunta qariyey iyo iyada oo xaaladaha la socodka, besvärjd iyo taagantahay xafiiltanka ruuxiga ah ee dhaqamada sexkriminalitetens gudcurka.
69-sano jirkaan rabto in aad beddesho da'da 49
Emile Ratelband The 69-sano jir ah in Netherlands ay doonayaan in ay helaan adag da'da sharciga ah ee 49 sano.
"Ciise Masiix i badbaadisay ka 27 sano khaniisnimada"
Daa'uud marag xoogan oo sida uu helay badbaadiyey iyo badbaadi Ciise ee 27 sano khaniisnimada. text Swedish.
- Magacaygu waa David, Waxaan ahay 44 sano jir ah, oo tanuna waa marag ah sida Ciise i badbaadisay ka toddoba iyo labaatan sano ah khaniisnimada. Laakiin waxaan la hadlayaa jacaylka.
Troendedöparna gubay, maanshaynay oo qudha ka jareen
Kuwa soo gaaray cadaadis, xabsi iyo dilay kuwaas oo ku dhaqma kitaabiga ah Mu'miniinta-baabtiiskii by bilowga tiro badan yihiin.
Baabtiiska: Halkee, goorma iyo sidee
Halkan, waxaan idin siin qaar ka mid ah Qorniinka cad on baabtiiska lagu sameeyey, marka loo sameeyo iyo sida.
Ma ah Ilaaha reer Kitaabka Quduuska ah la mid ah sida ilaah Quraanka ee?
"Kuwa sheeganaya in ay jecel yihiin, maamuus iyo Ilaah ahaantii in aanay jeclahay, maamuus iyo Ciise cibaadada caabudaan, ma."
Wuxuu guursaday hologram Hatsune Miku
Akihiko Kondo haysta version puppet ee hologram ku Hatsune Miku kii wuxuu guursaday a. Image Source: Facebook.
Nin 35-sano jir ah in Japan ayaa guursaday hologrom ah. Arooskii kici 160,000 kr. caruusada A oo wakiil ka ah barnaamijka computer dhaddig.
Jannada TV7 quduus ka dhigay in Uppsala
soo saare TV Ruben Agnarsson, aasaasihii iyo Madaxweynihii Martti Ojares, tababaraha channel Daniela Persin iyo Christer Åberg.
Waxaan ayaa lagu casuumay in furitaanka studio telefishanka channel Christian Jannada TV7 ee Uppsala.
Ciise guul dunida-taariikhi xaafuun
Ciise guul dunida-taariikhi xaafuun, hadiyadda Ilaah in dhammaan dadka dunida. In Ciise Masiix sameeyey iyada oo uu kafaaraggudka ahaa Victory Triple loo arag! Hawsha u ahayd 3 meelo kala duwan oo uu Ilaah hortiisa xaakinka wayn oo ka hor: dunida ruuxa waa ku guuleysan.
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 458 775 078 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 061 bloggartiklar, 92 365 kommentarer och 60 543 bönämnen.